Semalt: Ny tranonkala ampiasaina indrindra amin'ny fitaovana maoderina hanesorana ny angona an-tserasera
All manaisotra ny vaovao avy amin'ny pejy web misy. Izy ireo dia mahasoa ho an'ny tsirairay miezaka mamory ny angona ilaina avy amin'ny World Wide Web. Ireo rindrambaiko mikaroka ireo angon-drakitra vaovao automatique na manuel izany, maka ny angon-drakitra vaovao na efa misy ary manangona izany ho an'ny fidiranao. Ohatra, fandaharana fandinganana tranonkala sasany dia natao hanangonana vaovao momba ny vokatra avy amin'ny eBay sy Amazon. Manampy antsika hitadidy ny zava-mitranga any an-tsena izy ireo.
Ny fitaovana maoderina tsara indrindra:
Andeha hodinihintsika ny lisitry ny fitaovana maoderina tsara indrindra amin'ny aterineto:
Ny Dexi.io dia manohana ny fanangonana tahiry avy amin'ny tranonkala maro ary tsy mitaky download. Midika izany fa mila manokatra ny tranonkalany ofisialy ianao ary manomboka amin'ny famindrana ny angon-drakitrao. Ity fitaovana ity dia miaraka amin'ny mpamorona tranonkala iray, ary azo avotana ao amin'ny Google Drive and Box.net ny angona.
Scrapinghub dia fandaharanasam-pandrenesana mahery vaika momba ny angon-drakitra izay manampy ireo mpandrindra sy programmera haka ireo angona sarobidy. Ity programa ity dia mampiasa rotary kely mpanova ny anarana antsoina hoe Crawlera, izay manampy amin'ny famakiana vohikala marobe miaro ny bot..
VisualScraper dia natao hamerana ny angona amin'ny endritsoratra sy sary; Ity programa ity dia azo ampiasaina hanangonana fampahalalana avy amin'ny tranonkala fototra sy ambony. Azonao atao ny manangona, mitantana ary mandamina ny rakitrao amin'ny tranonkala miaraka amin'ny interface mampifandray azy.
Ny Spinn3r dia manampy ny votoatin'ny endriny mitovy amin'ny Google ary mamonjy ireo angon-drakitra ao amin'ny JSON. Ity mpangalatra ao amin'ny tranokala ity dia hivezivezy tsy tapaka ny tranokalanao ary hahita vaovao farany avy amin'ny loharano samihafa mba hakana boky ho anao manokana.
80legs dia sehatra iray mahasoa sy matanjaka ary mavitrika. Azonao atao ny manamboatra io programa io araka ny fepetra takinao rehefa manangona ny habetsaky ny angon-drakitra avy hatrany.
Ny fandrobana dia famoronana Chrome malaza amin'ny karazan-javatra maro. Ankoatra izany, tsara ho an'ny fanondranana ny data amin'ny Google Drive ary mahasoa ho an'ireo tsy mpandrindra sy programmera. Ity fitaovana maimaim-poana ity dia hamorona automatique XPaths ho an'ny URL anao.
OutWit Hub dia extensible Firefox extension amin'ny tarehin-tsoratra maro. Manampy izany hanatsotra ny fikarohana ao amin'ny tranonkala izany ary afaka mivezivezy ao anaty tranonkala amin'ny alàlan'ny tranonkala, manangona antontam-baovao maro isaky ny ora.
Import.io dia manamboatra ny tahiry voafaritra manokana amin'ny alalan'ny fampidirana ny vaovao avy amin'ny pejy Internet manokana ary ny fanondrony izany amin'ny CSV rakitra. Ity programa ity dia mampiasa ny teknolojia farany ary mamoaka angon-drakitra an-tapitrisany isan'andro Source .